Maitiro Ekutarisira Zvekare Kana Iwe Usine Hanya Nezvayo Chero Chinhu Chero - Pfungwa
Maitiro Ekutarisira Zvekare Paunenge Usine Hanya Nezvayo Chero Chinhu Chero
Saka… hauchisina basa nazvo, nezve chero munhu kana chero chinhu. Izvi zvinogona kunge zviri mhedzisiro yekushungurudzika.
Kushungurudzika chinhu chakashata. Iyo inomedza mufaro wako, inokanganisa mufaro wako, uye inokutorera iwe kugona kwekunzwa kuzara kuzere kwemanzwiro ako.
Kushungurudzika kunokanganisa zvese zvinobata, zvese zvakanaka nezvakaipa. Vanhu vanowanzo tarisa pane zvakanaka nekuti zvinopenya, zvinopenya, uye vanonzwa zvakanaka. Asi kunyangwe kusavapo kwekunzwa kwakashata kunogona kuve kurasikirwa kunorwadza.
“Ini ndinofanirwa kunzwa kusuruvara, kutsamwa, kutsamwa, kufara, tariro, mufaro! Chero chii zvacho! ”
Pane kudaro, zvese zvaunowana ndezvisina maturo uye kusava nehanya, gomba panofanirwa kuve izvo zvinhu zvinofanirwa kunge zviri.
Uye chakaipisisa ndechekuti mushure mechinguva, iwe chingorega kuva nehanya.
Zvinoita sekunge ndizvo chaizvo zvakaita hupenyu - zvinonetsa, zvinorwadza, zvakaoma, zvizere nekurasikirwa, uye nyonganyonga. Vanhu vanotyisa kune mumwe nemumwe. Vezvematongerwo enyika havana basa nazvo. Nyika iri kufa.
Mukuru webasa anongoda kuita uye kuti iwe usanyemwere zvakanyanya nekuti urikurova munhu wese kunze. Siya matambudziko ako pasuo! ” vanoti… Thanks. Ndichasvika ipapo. Chete, ini handinei nazvo futi.
Ndozvakangoita hupenyu. Handizvo here?
Hupenyu hunogona kuve hwakaoma, hunorwadza, uye hwakaomarara zvine utsinye, asi pane zvinhu zvakawanda zvakafanira kutarisira nezvazvo.
Yakavanzwa mune ese ekurwadziwa, nhamo, uye kuseka kwehupenyu zvinhu zvinojeka uye zvinopenya zvakakosha kutsvaga. Asi iwe unofanirwa kuve nehanya nekuzvitsvaga. Havangosvetuki vachikurova nembama kumeso.
maitiro ekubata nevakuru vasingaremekedze
Ungaita sei hanya zvekare - nezve chimwe chinhu, chero chinhu?
Tsvaga rubatsiro rwehunyanzvi - nguva dzose.
Kugadzirisa kushushikana uye kusava netariro kunouya pamwe pamwe hazvizoitika kubva pakuverenga zvinyorwa zvishoma pa internet.
Nyaya yekushushikana uye yakawanda yemazano iwe aunowana akaikomberedza painternet ndeyekuti zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvinogona kuzvikonzera.
Inogona kunge iri mhedzisiro mhedzisiro yemushonga kana chirwere chinokonzereswa nemamiriro ezvinhu kwenguva pfupi kana zvechigarire muhupenyu hwako, genetics, trauma, kushungurudzika, kana huwandu hwehupenyu hwako. Inogona zvakare kugadzirwa uye kuitirwa yakaipa kuburikidza nekushandisa zvinodhaka uye kudhakwa.
Chinokosha chekuburitsa dambudziko iri kutsvaga kuti dambudziko iri riri kubva kupi pakutanga.
Izvi zvingangoda nyanzvi yehutano hwepfungwa inogona kukubatsira kuchera nepfungwa dzako, hupenyu, uye nhoroondo kuti uwane mutsotsi.
Kusagadziriswa kunetsekana kwakakosha sosi yekushushikana uye kushandisa zvinodhaka kuvanhu. Uye iro mhando rebasa repfungwa rakakomba hachisi chinhu chaunogona kuita zvakachengeteka uri wega kana kuburikidza neruzivo iwe rwaunowana pane internet.
Iwe uchazoda rutsigiro rwehunyanzvi. Dzvanya pano kuti utange maitiro aya.
Usashandise simba rako remanzwiro pazviitiko zvazvino.
Kunzwira tsitsi uye kuneta kuneta matambudziko chaiwo anosangana nevanhu vazhinji. Munhu anogona kungotarisira zvakanyanya vasati vamhanya yavo yemukati tangi gasi isina chinhu.
Pane zvakawanda zviripo zvekutarisira nezvese mhirizhonga yekusarongeka munharaunda, nyaya dzinotyisa nhau, uye kutya, kurasikirwa, nekushungurudzika kunoitika kwese kwese.
Iwe haugone kutarisira nezvese zvinhu nguva dzese uye unotarisira kuchengetedza hutano hwepfungwa.
Masangano enhau haabatsire. Ivo vanoratidzira yakawanda yakatsetwa kana yakasarudzika kutaurisa iyo inotarisira kuumba manzwiro mune avo vanoona. Uye ivo pundits uye vatauri vavanogara vachiratidza vanowanzo shanda manzwiro emakona avo. Zvakaoma kugara uine ruzivo usingashandisi huwandu hwesimba remanzwiro iwe pachako.
Mhinduro ndeyekudzora kutora kwako kwezviitiko zvazvino uye nhau. Hongu, gara uine ruzivo, asi zviite nenzira shoma kubva kwazvakarerekera, zvisina tsvete sosi kana uchikwanisa.
Tiri kurarama munguva inoratidzira 24/7 nhau kutenderera, asi uropi hwedu hauna kuvakwa kuti utarisane nematambudziko ese kubva pasirese. Isu hatina kungo shanduka nenzira iyoyo. [ mabviro ]
Bvisa kubva mumapoka enhau enhau anowedzera kutsamwa, kusagadzikana, uye nhau dzakaipa.
Bvisa kana bvisa vanhu vanoramba vachitaura nezvezvinoitika zviitiko kubva kune ako feeds.
Ipa pfungwa dzako nemweya wako mukana wekuzorora, kunyangwe kana zvichireva kutora zororo kubva kumagetsi zvemagetsi kwechinguva chidiki.
Tarisa pane hanya nezve chinhu chidiki diki, uye wozovaka pane icho.
Izvo hazvizove nyore kusvetuka wakananga kuve nehanya nezve zvese zvikuru zvinhu zviri kuitika muhupenyu hwako. Muchokwadi, iwe ungangoona izvozvo zvichinyanyisa uye zvisingaite kuzviita.
Iyo pfungwa iri nani kutanga nekuyedza kutarisira nezve chimwe chinhu chidiki. Kana kuti pamwe unotova nechimwe chinhu chidiki muhupenyu hwako chaunofarira uye wakangozvisiya izvo.
Chipfuyo inzira huru yekutarisisa nekuti icho chinhu chaunogona kutarisira zvine mutsigo uye kuda. Haufanire kunetseka nezve chipfuwo chinokubaya kumusana kana kuita zvinhu zvine mumvuri zvinoitwa nevanhu dzimwe nguva.
Chipfuwo ndechimwe chinhu chaunogona kupa chako rudo, kuve nehanya nacho, uye kumisidzana nacho kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga
Asi hei, pamwe chipfuwo hachisi chisarudzo chakakodzera mamiriro ako ehupenyu. Chirimwa chinogona kuve chinotsiva chakanaka.
Zvitorere pachako imba diki kana inonaka yekuchengeta. Ivo kazhinji havade yakazara yakawanda yekuchengetedza. Nekudaro, ivo vachiri vanokwanisa kukubatsira iwe kufunga uye kuvapo pamusoro pekuvachengeta, kuve nechokwadi chekuti vakachekwa zvakatsvinda, kudiridzwa, uye kuisirwa mbeu.
Iwe unogona kufunga nezve potted tomato chirimwa. Izvo hazvina kuoma kutarisira, uye iwe unowana madomasi mairi!
Chero chipi chinhu chidiki chaunowana kuve nehanya nacho, tarisa pazviri kwechinguva. Zvino, kana iwe uchinzwa kugadzirira, shandisa hanya iwe yaunonzwa nezvayo sedombo rekutsvaka kuti uwane chimwe chinhu chekutarisira nezvacho, uyezve mumwe.
kuchengetedza hukama mushure mekufamba zvakanyanya
Enda zvishoma nezvishoma kuti urege kuzvikurisa uye nehunhu hwako. Kana, mushure mekuwedzera chechitatu kana chechina chinhu chekutarisira nezvacho, semuenzaniso, iwe ukatanga kuzviona zvakaoma kana kusava nehanya zvichipinda mukati, tora nhanho uchidzoka kubva kune chimwe chezvinhu izvozvo.
Ita zvinhu zvakambokupa izvo zvinokurudzira zvinokurudzira.
Zvitorere pepa nepeni. Gadzira runyorwa rwezvinhu gumi zvawaimboita munguva yakapfuura izvo zvakakupa kupenya kwekusimudzira zvinhu zvawaimbove nehanya nazvo.
Ivo vanogona kuve chero chinhu kubva mukushamwaridzana uye kushandisa nguva neshamwari dzako kuita yekuzvipira basa kune hunyanzvi hwekurovedza muviri kana chero, chaizvo.
Tarisa uone iyo rondedzero uye funga kuti inoshanda sei chimwe nechimwe chezvinhu izvozvo kuita izvozvi zvakapihwa manzwiro aunoita. Zvitore kubva pazvakawanda kusvika pane zvishoma zvinoshanda.
Tevere, enda pasi pechinyorwa uye edza kuita zvimwe zveakasiyana mabasa.
Ichi chiitwa chinogona kukwana kumutsa huropi hwako zvinokurudzira zvikamu uye kuita kuti vamwe vatarisire. Zvinogona kunge zvakaoma kuita, kana iwe ungasanzwa senge kuita chero chinhu.
Zvakadaro, iwo manzwiro chimwe chinhu chauchazongofanira kupfuuridza nepakati kuyedza kuburitsa zvimwe zvakanaka zvekuita zviitiko zvawakanyora.
Gadza zvimwe zvinangwa uye tanga kushanda pazviri.
“Ini handichazvidi! Ini handina basa nekuumba kana kusangana chero zvibodzwa! '
Uye ndizvo chaizvo chikonzero nei uchifanira kugadzira uye kutanga kushanda kune vamwe.
Kukurudzira hakuwanzo chimwe chinhu chinongodonha kubva muuropi hwako. Dzimwe nguva iwe unofanirwa kugadzira yako yekukurudzira nekumisikidza zvimwe zvinangwa zvekumhanyisa uye wozozviteedzera.
Chiito chekutevera chinangwa chinogona kukwana kuti utange uye ugadzire vamwe vane hanya, kunyanya kana iwe uine mhedzisiro yezvauri kuita muruoko kuti unakirwe.
nhetembo pfupi dzekufirwa nemunhu waunoda
Ichi zvakare chikamu chikuru chechirango. Kune dzimwe nguva apo kuteedzera chero chinangwa kwakaoma nekuti kurudziro inogona kudzikira kana basa racho richinetesa kana iwe ukarasa kuona kwekupedzisira chinangwa.
Kumisikidza zvibodzwa zvidiki izvo zvinokutungamira kuzvinangwa zvako zvakakura kunogona kumanikidza iwe kuti utarisire nezve iwo matanho mukuita, ayo anozobudira mune mamwe matunhu ehupenyu hwako.
Ingo rangarira kuti haugone kuzadzisa zvese zvinangwa zvaunogadza. Dzimwe nguva unozokundikana. Wese munhu anodaro.
Asi kana watadza, edza kusakanda maoko ako mudenga wodaidzira kuti, 'Handina basa nazvo.' Nekuti, iwe unoziva chii, kana iwe zvechokwadi usina hanya nekutadza, haungagumbuke nazvo.
Kana iwe uchinzwa chimwe chinhu paunokundikana - kunyangwe chiri chishuwo chisina kunaka - imhaka yekuti iwe waive nehanya. Tora hanya iyoyo uye uone chimwezve chinhu chaunogona kuchinjisa icho panzvimbo. Seta chinangwa chitsva, chakasiyana, kana kuyedza nzira yakasiyana kuchinangwa chako chekutanga.
Icho chokwadi chekuti iwe uri kutoverenga ichi chinyorwa chinoratidza kuti iwe une hanya zvakakwana kuda kuva nehanya zvimwe.
Ndiko kutanga kwako izvozvi uone panotungamira nhanho yako inotevera.
* Kusava nehanya chinhu chinonyengera chinotibira ruzivo rwehupenyu. Kana iwe uri kuomerwa nenguva yekuwana kurudziro, hanya, kana chirevo, kunyanya kana iwe uri kufunga kuzvikuvadza neimwe nzira, ingave iri zano rakanaka kutsvaga rutsigiro rwehunyanzvi kubva kuna murapi. Kusava nehanya kunogona kuva chiratidzo chedambudziko rakakura rinoda kugadziriswa usati wadzoreredza hanya yako.
Kunetseka kwepamoyo: Zvinokonzera, Zviratidzo, Uye Kurapa
Zvinhu gumi zvekuita kana iwe usinga nzwe kuda kuita chero chinhu
Sei Ndisingachagone Kuchemazve? Uye Maitiro Ekuti Uite Misodzi Iuye
8 Zvemumoyo Kuzvichengeta-Maitiro: Zvichengete Iwe Pamoyo
7 Zvinhu Zvekuita Kana Hapana Chinoita Kuti Ufare
25 Zvikonzero Nei Usiri Kufara: Zvinhu Zvinoita Kuti Unzwe Kusuwa
Zvikonzero zvishanu zvekurarama kana iwe usingakwanise kuita kunge uchitsvaga imwe izvozvi
7 Zvikonzero Nei Kuwana Tariro Yeramangwana Kwakakosha
kuziva sei kana mukomana kubasa anokufarira
mienzaniso yezvinhu zvinonakidza pamusoro pevanhu
rairo yekupa shamwari mushure mekurambana
unoziva sei kana hukama hwapera